Isifo se-Metabolic > Isifo sikashukela
Kuyini ukumelana ne-insulin? Metabolic Insulin Resistance Syndrome
Owesilisa: ukuphakama - 177 cm, isisindo - 146 kg, BMI - 46 kg / m²
Isifo se-Metabolic (MS) (bomqondofana: i-metabolic syndrome X, i-Reaven syndrome, i-insulin yokumelana ne-insulin) - ukukhuphuka kokuzwela kwezicubu ze-peripheral kuya ku-insulin ne-hyperinsulinemia, okuphazamisa i-carbohydrate, i-lipid, i-purine metabolism, futhi futhi okubangele ukuqina komfutho we-arterial.
Ngo-1981, uM. Hanefeld noW. Leoonardt bahlongoza ukuqokwa kwamacala ahlanganisa ukuhlangana kwezifo ezahlukahlukene ze-metabolic ngokuthi "metabolic syndrome" (MS).
Ngo-1988, uSolwazi G. Reaven, enkulumweni yakhe yaseBunting, esekelwe kulokho akubona ngokwakhe futhi efingqa izifundo zabanye ababhali, wafaka isithombe esidala lapho umphikiswano ungahambisani ne-insulin, ukukhuluphala kwesisu, i-arterial hypertension (AH), i-atherogenic dyslipidemia, kanye nesifo senhliziyo. isebenza njengokubonakaliswa kwesimo se-pathological, asikisela ukuthi siyibize ngokuthi "Syndrome X". Ngo-1989, uDkt Kaplan waqamba igama elithi “i-quartet ebulalayo”: inhlanganisela yesifo sikashukela, ukukhuluphala, umfutho wegazi ophakeme nesifo senhliziyo.
Ngokusho kukaH. Arnesen (1992), i-metabolic syndrome iyaqondakala isho ukuhlanganiswa okungenani kwezifo ezimbili kweziyisihlanu:
ukumelana ne-insulin nokubekezelela okwehlisiwe kuma-carbohydrate kanye ne-hyperinsulinemia,
dyslipoproteinemia nge-hypertriglyceridemia kanye namazinga aphansi we-cholesterol lipoproteins ephezulu,
ukuthambekela kwe-thrombosis kanye nokwanda kwamazinga e-plasma activator inhibitor,
umfutho we-arterial hypertension ngokumelene nesizinda somsebenzi owengeziwe wohlelo lwezinzwa olunozwela,
ukukhuluphala okujwayelekile ngokukhuphuka kokukhululwa kwamafutha acid yamahhala emthanjeni we-portal.
Ngokusho kwe-WHO, isibalo seziguli ezinesifo sokulwa ne-insulin esengozini enkulu yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2 singabantu abayizigidi ezingama-40-60 eYurophu. Emazweni athuthukile, ukwanda kwesifo se-metabolic kubantu abangaphezu kweminyaka engama-30 kungama-10-20%, e-United States - 34% (44% phakathi kwabantu abangaphezu kweminyaka engama-50). Kwakukholelwa ukuthi i-metabolic syndrome yisifo sabantu abaneminyaka ephakathi nendawo futhi (ikakhulukazi) abesifazane. Kodwa-ke, ukuhlola okwenziwe ngaphansi kwe-auspices ye-American Diabetes Association kusikisela ukuthi lesi sifo sibonisa ukukhula okuqhubekayo phakathi kwentsha nentsha. Ngakho-ke, ngokusho kososayensi abavela eWashington University, kusukela ngonyaka we-1994 kuya kowezi-2000, inani le-metabolic syndrome phakathi kwentsha lenyuka lisuka ku-4,2 laya ku-6.4%. Kuzwelonke, inani lentsha nentsha ene-Syndrome X ilinganiselwa ngaphezu kwezigidi ezimbili.
I-Metabolic syndrome ingenye yezinkinga ezicindezela kakhulu zemithi yesimanje ehambisana nokulondolozwa kwendlela yokuphila engenampilo. Umqondo "wendlela yokuphila enempilo" uhlanganisa ukudla okulinganiselayo, ukugcina isisindo somzimba ejwayelekile, ukuvivinya umzimba okujwayelekile kanye nokufanele iminyaka, nokwenqaba ukuphuza utshwala nokubhema.
Ngaphambi kokuhlaziya umqondo wokuthi "ukumelana ne-insulin", kuyini nokuthi yini onakho, kufanele kuthiwe lokhu kuphazamiseka kuvame ngokwanele. Bangaphezu kuka-50% abantu abane-hypertension abahlupheka yile sifo. Ngokuvamile, ukumelana ne-insulin (okuyikho, okuzochazwa ngezansi) kutholakala kubantu asebekhulile. Kepha kwezinye izimo, kutholakala ebuntwaneni. I-insulin ukumelana syndrome ivame ukuhlala ingaziwa ngaphambi kokuvela kokuphazamiseka kwe-metabolic. Iqembu lengcuphe lifaka abantu abane-dyslipidemia noma ukungabekezelelwa kwe-glucose, ukukhuluphala ngokweqile, umfutho wegazi ophakeme.
Yini le Ngabe ukwephulwa kwalezi zinto kunaziphi izici? I-metabolic syndrome yokumelana ne-insulin iyimpendulo engalungile yomzimba esenzweni sakwenye yezakhi. Umqondo uyasebenza emiphumeleni ehlukahlukene yemvelo. Lokhu, ikakhulukazi, kuhlobene nomphumela we-insulin kumaprotheni ne-lipid metabolism, isakhi sofuzo, nomsebenzi we-vascular endothelial. Impendulo engahambi kahle iholela ekukhuphulekeni kokuxineka kwe-complement esihlotsheni segazi nenani le-glucose edingekayo ngevolumu etholakalayo. I-insulin ukumelana syndrome ukugula okuhlanganisiwe. Kubandakanya ushintsho ekubekezelelekeni kwe-glucose, uhlobo 2 sikashukela, i-dyslipidemia kanye nokukhuluphala. I-Syndrome X nayo isho ukumelana nokuthathwa kwe-glucose (ukuxhomekeka kwe-insulin).
Kuze kube manje, ochwepheshe abakwazanga ukuyifunda ngokugcwele. Ukuphazamiseka okuholela ekuthuthukiseni ukumelana ne-insulin kungenzeka emazingeni alandelayo:
I-Receptor. Kulesi simo, lesi simo sikhonjiswa yisihlobo noma ukwehla kwenani lama-receptors.
Ezingeni lokuhambisa ushukela. Kulokhu, kwehla inani lamamolekyuli we-GLUT4.
I-Prereceptor. Kulokhu, bakhuluma nge-insulin engajwayelekile.
I-Postreceptor. Kulokhu, kukhona ukwephulwa kwe-phospholation kanye nokwephulwa kokuhanjiswa kwesiginali.
Ama-Anomalies ama-molecule we-insulin akavamile futhi awanakubaluleka komtholampilo. Ukuxineka kwe-receptor kungancishiswa ezigulini ngenxa yempendulo engemihle. Kubangelwa i-hyperinsulinemia. Imvamisa iziguli zincipha ngokulingana ngenani lama-receptors. Kulesi simo, izinga lokuphendula alithathwa njengesihlanganisi lapho kunqunywa khona ukuthi lingakanani izinga lokumelana ne-insulin. Izimbangela zokuphazamiseka kuncishiswa ngochwepheshe ekuphazamiseni kwe-postreceptor ekuhanjisweni kwesiginali. Izici ezinikezayo, ikakhulukazi, zifaka:
Ukwanda kokuqukethwe kwe-TNF-alpha.
Yehlise ukusebenza komzimba.
Ukwanda kokuhlungelwa kwamafutha acid angalinganiswanga.
Lezi yizici eziphambili ukuthi kaningi kunabanye zingavusa ukumelana ne-insulin. Ukwelashwa kufaka ukusetshenziswa kwe:
Ama-diuretics weqembu le-thiazide.
Umphumela we-glucose metabolism wenzeka kwezicubu ze-adipose, izicubu zesibindi nesibindi. Imisipha yesikhumba ithola cishe ama-80% ale khompiyutha. Imisipha kuleli cala isebenza njengomthombo obalulekile wokumelana ne-insulin. Ukubanjwa kweglucose kumaseli kwenziwa ngendlela yeprotheni ekhethekile ye-GLUT4. Lapho kusebenze i-insulin receptor, kucatshangelwa uchungechunge lokuphendula okuphindayo. Ekugcineni ziholela ekudlulisweni kwe-GLUT4 kulwelwesi lweseli kusuka ku-cytosol. Ngakho-ke i-glucose ithola ithuba lokungena esitokisini. Ukumelana ne-insulin (okujwayelekile kuzokhonjiswa ngezansi) kubangelwa ukwehla kwezinga lokudluliselwa kwe-GLUT4. Ngasikhathi sinye, kukhona ukuncipha kokusetshenziswa nokuthathwa koshukela ngamangqamuzana. Kanye nalokhu, ngaphezu kokulekelela ukuthathwa kwe-glucose kwezicubu eziphefumulayo, ukukhiqizwa kwe-glucose ngesibindi kuyacindezelwa nge-hyperinsulinemia. Ngohlobo 2 sikashukela, luyaqhubeka.
Kuhlanganiswa nokumelana ne-insulin kaningi. Uma isiguli seqa isisindo ngama-35-40%, ukuzwela kwehla ngo-40%. Izicubu ze-adipose ezitholakala odongeni lwesisu sangaphakathi zinomsebenzi ophakeme we-metabolic kunalowo otholakala ngezansi. Ngesikhathi sokuhlolwa kwezokwelapha, kwatholakala ukuthi ukukhululwa okuningana kwama-asidi kuma-fibers wesisu kuya egazini le-portal kuyacasula ukukhiqizwa kwe-triglycerides kwesibindi.
Ukumelana ne-insulin, izimpawu zazo ezihambisana kakhulu nokuphazamiseka kwe-metabolic, zingasolwa ezigulini ezinokukhuluphala kwesisu, isifo sikashukela sokukhulelwa, umlando womndeni wohlobo 2 sikashukela, i-dyslipidemia, ne-hypertension. Engcupheni abesifazane abane-PCOS (i-polycystic ovary). Ngenxa yokuthi ukukhuluphala kuwuphawu lokumelana ne-insulin, kuyadingeka ukuhlola uhlobo lokusatshalaliswa kwezicubu ezinamafutha. Indawo yayo ingaba yi-gynecoid - engxenyeni engezansi yomzimba, noma uhlobo lwe-android - odongeni olungaphambili lwe-peritoneum. Ukuqongelela engxenyeni engenhla yomzimba kubonakaliswa yisici esibaluleke ngokwengeziwe sokumelana ne-insulin, ukuguquguquka kweglucose nokubekezelela isifo sikashukela kunokukhuluphala ezingxenyeni ezingezansi. Ukubona inani lezicubu zesisu ezinamafutha, ungasebenzisa indlela elandelayo: nquma isilinganiso esinqeni, okhalweni kanye ne-BMI. Emazingeni angama-0,8 kwabesifazane ne-0,1 kwabesilisa neBMI engaphezu kwama-27, kutholakala ukukhuluphala kwamathumbu esiswini nokungamelana ne-insulin. Izimpawu ze-pathology ziziveza ngokwangaphandle. Ikakhulu, izindawo ezinamafutha, ezinolaka ziyabonakala esikhunjeni. Imvamisa kuvela emikhondweni, ezinqeni, ngaphansi kwezindlala ezincelisayo. Ukuhlaziywa kokumelana ne-insulin ukubalwa ngefomula. I-HOMA-IR ibalwa kanjena: i-insulin yokuzila ukudla (μU / ml) x ushukela we-glucose (mmol / l). Umphumela uhlukaniswe ngama-22,5. Umphumela uba inkomba yokumelana ne-insulin. UNorma - Januwari 18, 2015
Izimbangela ze-metabolic syndrome.
I-insulin emzimbeni yenza imisebenzi eminingi. Kepha umsebenzi wawo oyinhloko ukuxhumana nama-receptors ane-insulin athambile kulolungu ngalinye leseli. Ngemuva kwalokho, inqubo yokuhambisa ushukela usuka esikhaleni se-interellular iye kwiseli iyaqala. Ngakho-ke, i-insulin "ivula umnyango" esitokisini se-glucose. Uma ama-receptors engaphenduli i-insulin, khona-ke i-hormone ngokwayo noshukela kuqongelela egazini.
Isisekelo sokuqalwa kwesifo se-metabolic is insensitivity insulin - ukumelana ne-insulin. Le nto ingabangelwa izizathu eziningi.
Isakhi sofuzo. Abanye abantu bane-insulin insensitivity ezingeni lofuzo. Uhlobo lolo, olubhekele ukuthuthukiswa kwe-metabolic syndrome, lukwi-chromosome ye-19. Izinguquko zakhe zingaholela eqinisweni lokuthi
amaseli awatholakali ama-receptors okubopha i-insulin,
ama-receptors awazweli ku-insulin,
amasosha omzimba akhiqiza amasosha omzimba avimba ama-receptors athola i-insulin,
amanyikwe akhiqiza i-insulin engajwayelekile.
Kunombono wokuthi ukuncipha kokuzwela kwe-insulin kuwumphumela wokuziphendukela kwemvelo. Le mpahla isiza umzimba ukuba usinde ngokulambisa ngokuphephile. Kepha kubantu banamuhla, lapho bedla ukudla okunama-khalori amaningi nangamafutha, abantu abanjalo baba nomqondo wokukhuluphala kanye ne-metabolic syndrome.
Ukudla okunamafutha aphezulu ne-carbohydrate - into ebaluleke kakhulu ekwakhiweni kwe-metabolic syndrome. Amafutha e-asidi aqediwe eza namafutha ezilwane ngamanani amakhulu anegalelo ekuthuthukiseni ukukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, i-acid enamafutha ibangela ushintsho kulwelwesi lwamaseli, ibenze bangazinaki isenzo se-insulin. Ukudla ngokweqile okunama-kilojoule amaningi kuholela eqinisweni lokuthi ushukela omningi kanye namafutha acid angena egazini. Ukwedlula kwabo kufakwa kumaseli wamafutha kumanoni angaphansi, kanye nakwamanye izicubu. Lokhu kuholela ekunciphiseni kokuzwa kwabo kwe-insulin.
Indlela yokuphila yokwehlisa ukuthula. Ukwehla kokuzivocavoca komzimba kufaka ukwehla kwesilinganiso sazo zonke izinqubo ze-metabolic, kufaka phakathi ukuqhekeka nokufakwa emzimbeni kwamafutha. Ama-fatty acid avimba ukuhanjiswa kwe-glucose esitokisini futhi anciphise ukuzwela kolwelwesi lwawo ku-insulin.
I-hypertension ye-arterial ehlala isikhathi eside. Kubangela ukwephulwa kokujikeleza kwe-peripheral, okuhambisana nokuncipha kokuzwela kwezicubu kwe-insulin.
Umlutha wokudla okuphansi kwekhalori. Uma okuqukethwe kwe-caloric kokudla kwansuku zonke kungaphansi kwama-300 kcal, lokhu kuholela ekuphazamisekeni kwe-metabolic engalungiseki. Umzimba "uyonga" futhi wakhe izinqolobane, okuholela ekunyukeni kwamafutha amaningi.
Ukuxineka. Ukucindezeleka kwengqondo okuhlala isikhathi eside kuphakamisa ukulawulwa kwemizwa kwezitho nezicubu. Njengomphumela, ukukhiqizwa kwama-hormone, kufaka phakathi i-insulin, kanye nokusabela kwamaseli kuwo kuyaphazamiseka.
Ukuthatha abaphikisi be-insulin:
izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo
Le mishanguzo inciphisa ukumunca ushukela ngama-tishu, ahambisana nokuncipha kokuzwela kwe-insulin.
Ukweqisa kwe-insulin ekwelapheni isifo sikashukela. Ukwelashwa okungahambi kahle kuholela enanini elikhulu le-insulin egazini. Kuyamlutha kuma-receptors. Kulokhu, ukumelana ne-insulin kuwuhlobo lokuphendula kokuvikela komzimba kusuka ekuphakameni okukhulu kwe-insulin.
Ukuphazamiseka kweHormonal. Izicubu ze-Adipose ziyisitho se-endocrine futhi zivimbela ama-hormone anciphisa ukuzwela kwe-insulin. Ngaphezu kwalokho, ukukhuluphala okuvezwa ngokwengeziwe, kwehlisa ukuzwela. Kwabesifazane, ngokukhiqizwa okukhulayo kwe-testosterone futhi kunciphile i-estrogen, amafutha aqokama ngokusho kohlobo "lwendoda", ukusebenza kwemithambo yegazi nokuqhamuka kwe-arterial hypertension. Ukwehla kwezinga lama-hormone egilo nge-hypothyroidism kungadala futhi ukwanda kwezinga lama-lipids (amafutha) egazini kanye nokuthuthukiswa kokumelana ne-insulin.
Izinguquko ezihlobene nobudala emadodeni. Ukukhiqizwa kwe-testosterone kuyancipha ngeminyaka, okuholela ekuphikiseni i-insulin, ukukhuluphala ngokweqile, kanye nomfutho wegazi ophakeme.
Apnea ephusheni. Ukubamba ukuphefumula ephusheni kubangela indlala yomoya-mpilo yobuchopho kanye nokukhiqizwa okwandayo kwe-hormone yokukhula. Le nto inomthelela ekuthuthukiseni ukuzwela kwe-insulin.
Izimpawu ze-metabolic syndrome
Indlela yokuthuthukiswa kwe-metabolic syndrome
Ukuzivocavoca okuphansi komzimba kanye nokungondleki kuholela ekuzwelweni okungasebenzi kahle kwama-receptors ahlangana ne-insulin.
Ama-pancreas akhiqiza i-insulin eyengeziwe ukunqoba ukungalingani kwamangqamuzana futhi awanikeze ushukela.
I-Hyperinsulinemia (okweqile kwe-insulin esegazini) iba khona, okuholela ekufutheni, ukuwohloka kwe-lipid metabolism, nokusebenza kwemithambo yegazi, futhi nomfutho wegazi ukhuphuka.
I-glucose engafakwanga ihlala egazini - ukukhula kwe-hyperglycemia Ukugxila okuphezulu kwe-glucose ngaphandle kweseli nokungaphansi kwangaphakathi kubangela ukubhujiswa kwamaprotheni kanye nokuvela kwama-radicals wamahhala, olimaza ulwelwesi lweseli futhi lubangele ukuguga kwalo ngaphambi kwesikhathi.
Lesi sifo siqala singanakwa. Akubangeli izinhlungu, kepha akubeki ingozi.
Izinzwa ezenzakalelayo ku-metabolic syndrome
Ukuhlaselwa kwesimo esibi endaweni elambile. Ukuthathwa kwe-glucose ampofu kumangqamuzana obuchopho kubangela ukungaphatheki kahle, ukuncipha komoya wobudlova nemizwelo ephansi.
Ukukhathala. Ukuqhekeka kubangelwa ukuthi yize kunoshukela wegazi ophakeme, amaseli awatholi ushukela, ashiywa ngaphandle kokudla nomthombo wamandla. Isizathu "sokulamba" kwamaseli ukuthi indlela ehambisa ushukela ngokusebenzisa ulwelwesi lweseli ayisebenzi.
Ukudla okukhethiwe. Inyama nemifino akubangeli ukudla, ngifuna amaswidi. Lokhu kungenxa yokuthi amaseli obuchopho anesidingo se-glucose. Ngemuva kokusetshenziswa kwama-carbohydrate, imizwa iba ngcono isikhashana. Ukudla imifino nokudla kwamaprotheni (ushizi we-cottage shizi, amaqanda, inyama) kubangela ukozela.
Ukuhlaselwa ukushaya kwenhliziyo okusheshayo. Amazinga e-insulin akhuphukile asheshisa ukushaya kwenhliziyo futhi andise ukuhamba kwegazi kusuka enhliziyweni ngomuntu ngamunye. Lokhu kuqala kuholela ekuqineni kwezindonga zenxenye yesokunxele yenhliziyo, bese kuthi ekuthambeni kodonga lwemisipha.
Ubuhlungu enhliziyweni. Ukufakwa kwe-cholesterol emikhunjini yama-coronary kubangela ukuphazamiseka ekunakekelweni kwenhliziyo kanye nobuhlungu.
Ubuhlungu bekhanda kuhlotshaniswa nokunciphisa imithambo yobuchopho. I-capillary spasm ivela ngokukhuphuka kwengcindezi yegazi noma ngenxa ye-vasoconstriction enama-atherosulinotic plaque.
Ukucanuzelelwa kwenhliziyo nokulimala okubangelwa ukwanda kwengcindezi ye-intracranial maqondana nokuphulwa kokuphuma kwegazi kusuka ebuchosheni.
Umile futhi womile umlomo. Lokhu kungumphumela wokuvinjelwa kwemithambo ye-salivary yimizwa enozwela ngokuxineka okuphezulu kwe-insulin egazini.
Imvamisa yokuqunjelwa. Ukwanda ngokweqile kwezitho zangaphakathi namazinga aphezulu e-insulin kwehlisa amathumbu futhi kukhubaze ukukhululeka kwamajusi wokugaya ukudla. Ngakho-ke, ukufakwa kokudla endaweni yokugaya isikhathi eside.
Kukhulisa umjuluko, ikakhulukazi ebusuku - umphumela wokuvuselelwa kwe-insulin kohlelo lwezinzwa olunozwela.
Ukuboniswa kwangaphandle kwe-metabolic syndrome
Ukukhuluphala kwesisu, ukuvezwa kwamafutha esiswini kanye nebhande lamahlombe. Kuvele isisu "sobhiya". Izicubu ezinamafutha aziqongeleli kuphela ngaphansi kwesikhumba, kodwa nezungeze izitho zangaphakathi. Akugcini nje ngokubanciphisela, besebenza umsebenzi wabo, kepha futhi idlala indima yesitho se-endocrine. Amafutha efaka izinto ezifaka isandla ekubonakala kokuvuvukala, ukwanda kwezinga le-fibrin egazini, okwandisa ubungozi bokuqhekeka kwegazi. Isifo sokukhuluphala kwesisu sitholakala uma isilinganiselo sesinqe sedlula:
kumadoda angaphezu kuka-102 cm,
kwabesifazane abangaphezu kuka-88 cm.
Amabala abomvu esifubeni nasentanyeni. Lezi yizimpawu zokucindezela okwandisiwe okuhambisana ne-vasospasm, okubangelwa ukweqiwa kwe-insulin ngokweqile.
Umfutho wegazi (ngaphandle kwemithi ye-antihypertensive)
I-systolic (ephezulu) umfutho wegazi weqa i-130 mm Hg. Ubuciko.
ingcindezi ye-diastolic (engezansi) idlula i-85 mm Hg. Ubuciko.
Izimpawu zaselebhu ze-metabolic syndrome
Ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical kubantu abane-metabolic syndrome kwembula ukuphambuka okubalulekile kokujwayelekile.
Triglycerides - Amafutha ancishwe i-cholesterol. Ezigulini ezine-metabolic syndrome, inani labo lidlula i-1.7 mmol / L. Izinga lama-triglycerides likhuphuka egazini ngenxa yokuthi amafutha akhishwa emthanjeni we-portal ngesikhathi sokukhuluphala kwangaphakathi.
AmaLipoprotein i-high density (HDL) noma i- “good” cholesterol. Ukugxila kuncipha ngenxa yokusetshenziswa okunganele kwamafutha zemifino nokuphila kokuhlala phansi.
abesifazane - ngaphansi kwe-1,3 mmol / l
amadoda - ngaphansi kwe-1.0 mmol / l
I-Cholesterol, low density lipoproteins (LDL) noma “embi” cholesterol, ukwanda okungaphezulu kwe-3.0 mmol / L. Inani elikhulu lamafutha acid avela ezicutshini ze-adipose ezizungeze izitho zangaphakathi zingena emthanjeni we-portal. Lama-acid anamafutha ashukumisa isibindi ukuhlanganisa i-cholesterol.
Ukusheshisa ushukela wegazi ngaphezu kwe-5.6-6.1 mmol / l. Amangqamuzana omzimba awasebenzisi i-glucose kahle, ngakho-ke ukugxila kwegazi lawo kuphakeme ngisho nangemva kokuzila ukudla ebusuku.
Ukubekezelelwa kwe-glucose. I-75 g ye-glucose ithathwa ngomlomo futhi ngemuva kwamahora ama-2 izinga likashukela wegazi linqunywe. Kumuntu ophile kahle, ushukela udonswa ngalesi sikhathi, futhi izinga lakhona libuyela kokujwayelekile, lingadluli ku-6.6 mmol / L. Nge-metabolic syndrome, ukuhlangana kweglucose kungu-7.8-11.1 mmol / L. Lokhu kusikisela ukuthi i-glucose ayidonswa amangqamuzana futhi ihlala egazini.
Uric acid ezingaphezu kwama-415 micromol / l. Izinga layo liphakama ngenxa yokulimala kwe-purine metabolism. Nge-metabolic syndrome, i-uric acid yakhiwa ngesikhathi sokufa kweseli futhi ayikachazwa kahle yizinso. Kubonisa ukukhuluphala kanye nengozi enkulu yokuqalwa i-gout.
I-Microalbuminuria Ukuvela kwamamolekyuli amaprotheni emchameni kukhombisa ushintsho ekusebenzeni kwezinso okubangelwa isifo sikashukela noma umfutho wegazi ophezulu. Izinso aziwuhlungi umchamo ngokwanele, ngenxa yalokho, ama-molecule amaprotheni angena kuwo.
Yimuphi udokotela okufanele ngithinte uma ngikhuluphele ngokweqile?
Ama-endocrinologists aphatha i-metabolic syndrome. Kepha uma unikezwe izinguquko ezahlukahlukene zomzimba emzimbeni wesiguli, kungadingeka ukuthi kuboniswane nabelaphi bezengqondo
Lapho kuqokwa udokotela (i-endocrinologist)
Ekwamukeleni, udokotela uqoqa i-anamnesis futhi ahlanganise umlando wezokwelapha. Ukuhlolwa kusiza ukuthola ukuthi yini ebangela ukukhuluphala kanye nokukhula kwe-metabolic syndrome:
imikhuba yokudla, umlutha wokudla okumnandi nokunamafutha,
wayeneminyaka emingaki bekhuluphele
noma izihlobo zinenkinga yokukhuluphala,
ukuba khona kwesifo senhliziyo,
izinga lomfutho wegazi.
Ukunqunywa kohlobo lokukhuluphala. Ku-metabolic syndrome, amafutha agxiliswe odongeni lwasekhaya olungaphandle, isiqu, intamo nobuso. Kuyinto ukukhuluphala esiswini noma ukukhuluphala kwabesilisa. Ngohlobo lwe-gynoid noma lowesifazane, ukukhuluphala kufakwa engxenyeni engezansi yomzimba: okhalweni kanye namabhuthi.
Isilinganiso sokujikeleza okhalweni. Izinkomba ezilandelayo zifakazela ukukhula kwe-metabolic syndrome:
Uma kunokuqagelwa kokuthola ifa, lapho-ke ukutholakala kwe "ukukhuluphala" kwenziwa ngamanani angama-94 cm nama-80 cm, ngokulandelana.
Ukulinganiswa kwesilinganiso sokujikeleza okhalweni kanye nombuthano okhalweni (OT / OB). Isilinganiso sabo akufanele singeqi
emadodeni angaphezu kwe-1,0,
kwabesifazane abangaphezu kuka-0.8.
Isibonelo, ukujikeleza kwesinqe sowesifazane kungama-85 cm, kanti okhalweni lwakhe kuyi-100 cm. 85/100 = 0.85 - lesi sibalo sikhombisa ukukhuluphala kanye nokukhula kwe-metabolic syndrome.
Isisindo nokukhula kokulinganisa. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa isikali sezokwelapha kanye ne-stadiometer.
Ukubalwa kwe-index mass body (BMI). Ukuthola inkomba kusetshenziswa ifomula:
BMI = isisindo (kg) / ukuphakama (m) 2
Uma inkomba ikububanzi obungu-25-30, lokhu kubonisa isisindo eseqile. Amanani we-Index angaphezu kwama-30 akhombisa ukukhuluphala.
Isibonelo, isisindo sowesifazane singama-90 kg, ukuphakama okungu-160 cm. 90/160 = 35.16, okubonisa ukukhuluphala.
Ukuba khona kwe-striae (amamaki wolule) esikhunjeni. Ngokukhuphuka okukhulu kwesisindo, ungqimba lwesikhumba olucashile kanye nama-capillaries amancane egazi kudwengulwa. I-epidermis ihlala iqinile. Ngenxa yalokhu, imivimbo ebomvu engu-2-5 mm ububanzi ivela esikhunjeni, esigcina sigcwaliswe ngemicu yokuxhuma futhi sikhanye.
Ukuxilongwa kwelabhoratri ye-metabolic syndrome
Inani le-cholesterol lenyukile ≤5.0 mmol / L. Lokhu kubangelwa ukungasebenzi kahle kwe-lipid metabolism kanye nokungakwazi komzimba ukumunca kahle amafutha. I-cholesterol ephezulu ihlotshaniswa nokudla ngokweqile namazinga aphezulu e-insulin.
Ama-lipoproteins aphezulu (ama-HDL noma ama-cholesterol aphezulu) ancishisiwe ngaphansi kwe-1 mmol / l emadodeni futhi kungaphansi kwe-1,3 mmol / l kwabesifazane. I-HDL "cholesterol" enhle ". I-soluble kakhulu, ngakho-ke ayifakwa ezindongeni zemithambo yegazi futhi ayibangeli i-atherosclerosis. Ukugcwala okukhulu kwe-glucose ne-methylglyoxal (umkhiqizo wokuqhekeka wama-monosugars) kuholela ekubhujisweni kwe-HDL.
Isisindo se-lipoproteins ephansi yamangqamuzana (i-LDL noma i-choleensol ephansi) ikhuphuka ≤3.0 mmol / L. "I-cholesterol embi" yakheka ngaphansi kwezimo ze-insulin ngokweqile. Kuyinto encibilikayo kancane, ngakho-ke, ifakwa ezindongeni zemithambo yegazi kanye namafomu ama-atherosclerotic plaque.
I-Triglycerides iphakanyisiwe > 1.7 mmol / L. Ama-fatty acid esters asetshenziswa ngumzimba ukuthutha amafutha. Bangena ohlelweni lwe-venous kusuka kumaseli we-adipose, ngakho-ke, ngokukhuluphala, ukuqina kwabo kuyanda.
Ukusheshisa ushukela wegazi > 6.1 mmol / L. Umzimba awukwazi ukusebenzisa i-glucose futhi izinga layo lihlala liphezulu ngisho nangemva kokuzila ukudla ebusuku.
I-insulin yanda > 6.5 mmol / L. Izinga eliphakeme laleli hormone pancreatic libangelwa ukungahambisani nezicubu kwe-insulin. Ngokwandisa ukukhiqizwa kwe-hormone, umzimba uzama ukwenza izinto ngama-insulin receptors cell cell, futhi uqinisekise ukufakwa kweglucose.
ILeptin inyukile > 15-20 ng / ml. I-hormone ekhiqizwa izicubu ze-adipose ebangela ukumelana ne-insulin. Izicubu eziningi ze-adipose, ziphakama kakhulu ekuhlakazweni kwale hormone.
Imithi yokwelashwa kwe-metabolic syndrome
Ukwelashwa kwezidakamizwa kwe-metabolic syndrome kuhloselwe ukuthuthukisa ukumuncwa kwe-insulin, ukuqinisa amazinga kashukela kanye nokuqina kwamafutha emzimbeni.
Iqembu lezidakamizwa Indlela yokwelashwa Abamele Ungayithatha kanjani
Ukwelashwa kokuphazamiseka kwe-lipid metabolism
Izidakamizwa ze-Hypolipidemic (ama-statins nama-fibrate) Banciphisa ukuhlangana kwe-cholesterol okungaphakathi kwe-intracellular, kufaka isandla ekususweni kwe "cholesterol embi" emgodini wegazi. Ama-figrate anciphisa izinga le-uric acid ngenxa yokufakwa ngosawoti kulo izinso. Rosuvastatin Thatha u-5-10 mg wesidakamizwa 1 isikhathi ngosuku. Ngemuva kwamaviki ama-4, udokotela ulinganisa izinga le-cholesterol egazini futhi angakhuphula umthamo.
Fenofibrate Thatha umuthi amahlandla ama-2 ngosuku: amaphilisi ama-2 ngesikhathi sokudla kwasekuseni kanye ne-1 capsule ngesikhathi sokudla kwakusihlwa.
Ukwelashwa kokumelana ne-insulin nokulawula ushukela
Izidakamizwa zokunciphisa ukumelana ne-insulin Thuthukisa ukuthathwa kwe-glucose esitokisini ngaphandle kokuvuselela ukukhiqizwa kwe-insulin. Yehlisa ukukhiqizwa kwamafutha acid, ukusheshisa ukuguqulwa kwe-glucose ku-glycogen. Kuthuthukisa ukubopha kwe-insulin kuma-cell receptors, kwandise ukuzwela kwezicubu kuyo. I-Metformin Umthamo unqunywa ngokuya ngezinga le-glucose esegazini lamathebulethi ayi-1-4. Umthamo wansuku zonke uhlukaniswe ngemithamo engu-2-3. Sebenzisa ngemuva kokudla.
Izidakamizwa Zokusebenzisa Insulin Sensitization Le mishanguzo inciphisa ukumuncwa kwe-glucose emathunjini, inciphisa ukukhiqizwa kwe-glucose esibindini futhi kwandise ukuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin. Yehlisa isifiso sokudla bese usiza ukunciphisa umzimba. Siofor
I-Glucophage Umthamo wokuqala ngu-500-850 mg izikhathi ezingama-2-3 ngosuku ngokudla. Ngemuva kwamaviki ama-2, ukulungiswa komthamo kuyadingeka ukubheka izinga le-glucose esegazini.
Amavithamini I-Alpha lipoic acid ilawula isibindi, ithuthukise i-cholesterol metabolism. Kuthuthukisa ukufakwa kweglucose emithanjeni yamathambo. I-Alpha lipon Thatha ithebhulethi e-1 izikhathi izikhathi ezingama-2-3 ngosuku kumaviki ayi-3-4
Izidakamizwa ezijwayelekile zisebenza njenge-metabolism kanye nomfutho wegazi
I-Angiotensin-Ukuguqula I-Enzyme Inhibitors Vimba isenzo se-enzyme esidala i-vasoconstriction. Banwebisa ukukhanyiswa kwemithambo yegazi, banciphise umfutho wegazi, lula umsebenzi wenhliziyo. I-Captopril Umuthi uphuzwa esiswini esingenalutho izikhathi ezi-3 ngosuku. Umthamo wansuku zonke uvela ku-25 kuye ku-150 mg.
I-Enalapril 0,01 g 1 isikhathi ngosuku, noma ngabe ukudla kungakanani.
Ama-calcium antagonists noma ama-calcium blockers Yehlisa umfutho wegazi, wehlise umfutho we-oksijini wesicubu senhliziyo futhi ngasikhathi sinye uthuthukise umsoco wawo. Banomphumela obuthakathaka we-diuretic. Felodipine
Thatha ithebhulethi e-1 (5 mg) kanye ngosuku. Sebenzisa noma ngabe ukudla.
Amafutha we-Fat Absorption Yehlisa umsebenzi wama-enzymes wokugaya ukudla futhi ngaleyo ndlela uphazamise ukuqhekeka nokufakwa kwamafutha emathunjini amancane. I-Xenical Thatha i-capsule eyodwa (i-120 mg) ngokudla okuyinhloko noma kungakapheli ihora ngemuva kokudla.
I-Orlistat Thatha i-120 mg ngenkathi uphuza isidlo esikhulu amahlandla ama-3 ngosuku. Uma ukudla kunamafutha amancane, i-orlistat ayikwazi ukuthathwa.
Izidakamizwa ezithinta isistimu yezinzwa ephakathi nendawo futhi zivimbela iphango Benza imodeli yokudla, banciphise isidingo sokudla, banciphise iphango. Basiza ukubhekana nendlala ngenkathi bedla. I-Fluoxetine I-antidepressant imiselwe amaphilisi ama-1-3 usuku lonke ngemuva kokudla.
Ukunaka! Ama-anorectics (izidakamizwa ezivimbela iphango) azikwazi ukusetshenziselwa ukunciphisa isisindo ekwelapheni i-metabolic syndrome. Le mithi ibuye inciphise ukuzwela kwezicubu kwe-insulin. Ama-anorectics afaka lezi zidakamizwa ezidumile: iFluoxetine, iProzac, iMeridia, iReduxin.
Ukuze ubuyisele i-metabolism futhi ukwandise ukuzwela kwe-insulin, kufanele kuhlangatshezwane nemibandela emi-2:
umsoco ophansi we-carbohydrate
ukusebenza ngokomzimba okulinganiselayo
Masihlale imininingwane eminingi kulezo zindawo.
Ukuqeqeshwa ngokomzimba kwe-metabolic syndrome.
Ngesikhathi semidlalo, umzimba ushisa izitolo ezinamafutha. Ngaphezu kwalokho, i-metabolism isheshiswa, ngakho-ke, ngisho nasekuphumuleni, umzimba uyaqhubeka ukucubungula amafutha abe amandla.
Ngenxa yokuqeqeshwa, ama-hormone enenjabulo - ama-endorphin - akhiqizwa ebuchosheni. Lezi zinto azithuthukisi kuphela imizwa, kepha futhi zisiza ukulawula isifiso sokudla futhi zinciphise izifiso zama-carbohydrate. Ngakho-ke, lapho kunomuzwa wendlala, ukudla okunempilo kwamaprotheni kuyasiza ekunqobeni.
Isimo esihle senhlalo nokuphila kahle, ukukhulisa ukuzwela kwe-insulin kanye nesibalo esinciphile nokuncipha kwenqubo yokuguga, ukusebenza okwandisiwe - amabhonasi avela emidlalweni ejwayelekile.
Imithetho embalwa yokukusiza ukwazi ukubhekana nokukhuluphala ngokweqile.
Zithokozise. Khetha umdlalo ofanele wena. Uma amakilasi ezoletha injabulo, khona-ke ngeke uyeke ukuqeqeshwa.
Qeqesha njalo. Vumela isikhathi sokuzivocavoca umzimba nsuku zonke. Kumele uqonde ukuthi impilo yakho incike ekuyalweni kule ndaba. Okuhle kakhulu kubhekwa njengokuzivocavoca izinsuku eziyi-6 ngesonto imizuzu engama-60.
Khetha umdlalo ofanele.
Kubantu abadala kuneminyaka engama-50 abanezifo zokujikeleza kanye nesifo senhliziyo, ukuhamba noma ukuhamba kweNordic ngezigxobo ze-ski kufanelekile.
Kubantu abangaphansi kweminyaka engu-50, abagijimayo abahlaziyiwe.
Kunoma ikuphi ubudala, ukubhukuda, ukuhamba ngamabhayisekili, ukushushuluza, umshini wokugibela kuzosiza ukuthuthukisa ukusebenza kwenhliziyo.
Musa ukusebenza ngokweqile. Ukuqeqeshwa akufanele kube buthaka, uma kungenjalo kuzokulimaza kabi ukungazweli komzimba. Qala ngomthwalo omncane futhi kancane kancane wandise ubude nobungako bamakilasi.
Bukela ukushaya kwakho. Ngokuphumelelayo, amafutha ashiswa imvamisa yama-110-130 beats ngomzuzu. Isilinganiso senhliziyo enkulu: iminyaka engama-220 yeminyaka ngeminyaka. Isibonelo, uma uneminyaka engama-40, khona-ke inkomba eyingozi yakho ingu-220-40 = 180 ukushaywa ngomzuzu. Kuyinto elula ukusebenzisa umgibeli wokushaya kwenhliziyo ukulawula ukushaya kwenhliziyo yakho ngesikhathi sokuqeqeshwa.
Cabanga ukwephulwa okuncike kwizifo ezihlangana kanye nezinkinga ezibangelwa yi-metabolic syndrome. Kunconywa ukwenqaba emakilasini uma:
amaprotheni atholakala kumchamo
umfutho wegazi uphakeme kakhulu kunokwejwayelekile yakho,
amazinga eglucose angaphezu kuka-9.5 mmol / L.
Abantu abaningi banesithakazelo kulo mbuzo: "Yimiphi imidlalo ephumelela kakhulu ekulweni nokukhuluphala?" Ukuze wandise ukusebenzisa kwakho, ezinye izivivinyo ze-anaerobic kanye ne-aerobic zonke ezinye izinsuku.
Ukuzivocavoca kwe-Anaerobic noma ukuqeqeshwa kwamandla (lapho izicubu zisebenza ngokusweleka kwe-oksijini) zisiza ukuthuthukisa imetabolism futhi zinciphise ukumelana ne-insulin ngokwandisa inani labathutha i-glucose. Ukuzivocavoca ngamandla kwenza ukukhululeka kwemisipha kubonakale kakhulu, kuqinise amathambo namalunga, kukuvumele ukuba ube namandla ngokwengeziwe. Ukuqeqeshwa kwamandla kulungele izinsizwa nezintokazi.
Ukuzivocavoca okwenziwa ngejubane elikhulu futhi kudinga umzamo omkhulu. Zibangela ubuhlungu obukhulu emisipha yokusebenza. Lokhu kungenxa yokuthi ama-microfractures avela kumicu yemisipha kanye ne-lactic acid eqongelela izicubu zemisipha.
Kukholelwa ukuthi ukuzivocavoca okunjalo kukhulisa ukuzwela kwe-insulin, kepha ngabantu abanezinhliziyo ezinempilo kuphela abangazenza. Ukuzivocavoca kwe-Anaerobic kufaka phakathi:
ukubhukuda ngejubane elisheshayo
ukuphakamisa isisindo (ukuqeqeshwa kuma-simulators).
Ukuzivocavoca okwenziwa ngezindlela ezi-3-5 ezingapheli imizuzu eyi-1.5. Okunye ukuzivocavoca ukuze usebenze amaqembu ehlukene izicubu.Ubude besikhathi sesiqalo yimizuzu engama-20. Kancane kancane khulisa isikhathi sokusebenza kuze kube yihora.
Ukuvivinya umzimba kwe-aerobic yenziwe kancane ngamandla aphansi noma aphakathi. Kulesi simo, izicubu zihlinzekwa kahle komoya-mpilo, kanti namafutha angaphansi asashiswa. Ukuzivocavoca kwe-aerobic kubizwa nangokuthi ukusebenzisa ama-Cardio, kuvimbela izifo zenhliziyo, ukuthuthukisa ukusebenza kwamaphaphu kusize ukulwa nokuxineka. Ukuzivocavoca kwe-Aerobic kufaka phakathi:
ukuhamba ngebhayisekili noma ukuzivocavoca.
Ukuqeqeshwa kokuqala akufanele kudlule imizuzu eyi-15 ngosuku. Khulisa isikhathi sakho seklasi ngemizuzu emi-5 ukuya kwe-10 ngesonto. Kancane kancane, uzofinyelela izinga elidingekayo lokukhuthazela, futhi amamaki akho azohlala cishe ihora. Uma uqhubeka, amafutha amaningi "ayashisa".
Inketho yokuqeqesha engasindi. Uma kunezinkinga ezinsweni (nephropathy) noma emehlweni (i-retinopathy), bese usebenzisa inkimbinkimbi yokuvivinya umzimba. Akubangeli ukwanda kwengcindezi futhi akhuphulisi umthwalo ezithweni ezigulayo. Ama-lightweight ukusebenzisa amandla aqinisa amalunga, athuthukise ukusebenzisana futhi avuse izinqubo ze-metabolic.
Ngesikhathi samakilasi, sebenzisa ama-dumbbells (noma amabhodlela amanzi epulasitiki) anesisindo esingu-300-500 g. Yenza lezi zinhlobo zokuzivocavoca:
Ukushintshashintsha nokwanda kwama-biceps,
ukusabalalisa izingalo ezinhlangothini endaweni ethambekele kuyo.
Ukuvivinya ngakhunye kwenziwa kancane futhi ngokushelela amaqoqo ama-3 amahlandla ayi-10. Thatha ikhefu lemizuzu engu-10-15 phakathi kwamasethi.
Khumbula ukuthi izicubu eziningi emzimbeni wakho kanye namafutha amancane, kuphakama ukuzwela kwezicubu ukungena kwe-insulin. Ngakho-ke, uma wehlisa isisindo, ukubonakaliswa kwe-metabolic syndrome kuzoba kuncane.
Ukudla okufanele nge-metabolic syndrome.
Umgomo oyinhloko wokudla kwe-metabolic syndrome ukukhawula ukungena kwama-carbohydrate namafutha. Lokhu kuzosiza ukuyeka ukukhuluphala futhi kancane kancane ulahlekelwe isisindo.
Izazi zokudla zanamuhla ziphikisana nokudla okusheshayo nokudla okune-calorie amancane. Kulokhu, umuntu ulandelwa njalo umuzwa wokulamba, ngakho-ke abantu abanamandla amakhulu kuphela abanamathela ekudleni okunjalo. Ukudla okuvinjelwe i-carbohydrate (low-carb) kuyamnandi futhi kuyanelisa. Izitsha ezahlukahlukene zingalungiswa kusuka kumikhiqizo evunyelwe.
Ukudla okunamakhalori aphansi kwehlisa ukuvikela komzimba ezifweni ezingamagciwane namagciwane. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba awunazo amaprotheni namavithamini adingekayo ekusebenzeni kwamasosha omzimba. Ukudla okune-carb ephansi, okuphambene nalokho, kuqinisa amasosha omzimba futhi kuvumise i-microflora yamathumbu, sibonga amaprotheni nemikhiqizo yobisi omuncu, izithelo nemifino.
Ukudla okune-carb ephansi kufanele kube ukudla okuphila konke. Ukudla ikhalori kungama-1600-1900 kilojoule. Udinga ukudla kaningi izikhathi ezingama-4-5 ngosuku, kepha ngezingxenye ezincane. Lokhu kudla kusiza ekugwemeni indlala.
Uhlu lwemikhiqizo enconyiwe:
izinhlobo ezinamafutha amancane enyama yezilwane (i-veal, unogwaja, inkukhu ngaphandle kwesikhumba) nenkukhu i-150-200 g ngosuku,
inhlanzi nokudla kwasolwandle okungu-150 g,
amaqanda - 1-2 ngosuku ngosuku ngendlela ye-omelet noma ebilisiwe kanzima,
imikhiqizo yobisi enamafutha amancane,
ushizi wasekhishini 100-200 g,
izinhlobo ezinamafutha amancane futhi ezingabukhali koshizi obunzima - zikhawulelwe ku-30 ​​g,
amasoseji wenyama enamafutha amancane noma umvimba ososo abilisiwe izikhathi ezi-2 ngeviki,
25% imifino ngendlela eluhlaza, enye iselwe, ibilisiwe, ibhakwe, isitshiwe (okungenani i-400 g).
Imifino eluhlaza enconyiwe,
Izithelo ezingafakwanga amajikijolo kanye namajikijolo aze afike ku-400 g.
sauerkraut egezwe ngamanzi,
iphalishi kusuka kubhali wepharele, i-buckwheat, ama-groats amaqanda, ilayisi ansundu. I-150-200 g ngokukhonza, ngokuya ngemikhawulo yesinkwa,
izifundo zokuqala (250-300 g) on ​​amafutha aphansi, inyama, inhlanzi noma umhluzi we-mushroom, isobho semifino.
isinkwa sikakolweni wonke, imikhiqizo ye-bran efinyelela ku-200 g,
iti, izithelo nemifino ngaphandle koshukela,
isiqeshana sikashokholethi omnyama, oshukela abangena esikhundleni sikashukela,
ukugcwala koketshezi kukhawulelwe kumalitha ayi-1.5. Lokhu kubangela ukweqiwa okwandisiwe kwamafutha emzimbeni.
Kuyadingeka ukwenqaba imikhiqizo enjalo:
confectionery: amaswidi, amakhukhi, imikhiqizo yekhilimu,
ukubhaka, ikakhulukazi ikhekhe eliyingozi ne-puff,
inyama enamafutha: ingulube, iwundlu, idada,
ukudla okusemathinini, inyama ebunjiwe nenhlanzi, isoseji, isando,
ilayisi, i-semolina ne-oatmeal, i-pasta,
ukhilimu, iyogathi emnandi, ushizi we-cottage shizi kanye nemikhiqizo evela kuwo,
imajarini, uwoyela wokupheka,
omisiwe, ubhanana, amagilebhisi, izinsuku nezinye izithelo ezimnandi,
imayonnaise, amasoseji enosawoti, izinongo,
iziphuzo ezinoshukela, iziphuzo kanye nemicu enoshukela.
Kanye njalo emavikini ama-1-2, ungathatha usuku uyeke futhi usebenzise ngokulinganisela ukudla “okungafuneki”.
Imenyu eyisampula yosuku
Ibhulakufesi: iphalishi le-porridge ngebhotela, iqanda elibilisiwe noma amaqanda aqhekekile, itiye noma ujusi.
Ibhulakufesi lesibili: izithelo.
Isidlo sasemini: isobho lemifino ngo-ukhilimu omuncu (ngaphandle kokuthosa futhi ngaphandle kwenyama), imifino ebosisiwe emafutheni wemifino, inyama ebilisiwe, izithelo ezingenasithelo.
Ukudla kwakusihlwa: isaladi yemifino entsha, inhlanzi ebilisiwe noma ebilisiwe engu-150-200 g, itiye.
Isidlo sakusihlwa sesibili: i-yoghur noma i-yoghur engafakiwe.
Izimbangela eziphambili zokuthuthukiswa kwe-metabolic syndrome
I-insulin ekhiqizwa amaseli we-pancreatic izicubu yenza imisebenzi eminingi ehambisana nokulawulwa kwezinqubo ze-metabolic.
Umsebenzi oyinhloko we-hormone ukwakheka kwezibopho ezinama-receptors akhethekile ebusweni be-membrane yamaseli wamaseli we-insulin. Ngenxa yokwakheka kwenkimbinkimbi enjalo, ushukela uthuthwa ngaphakathi kwesikhala seseli, ngenxa yalokho, iseli liyondleka.
Lapho ukungatheleleki kwe-insulin kwenzeka, hhayi kuphela ushukela kodwa futhi ne-insulin kuqongelela egazini, okuholela kokungasebenzi kahle kakhulu ekusetshenzisweni kokuphendula kwe-metabolic.
Isifo se-metabolic empeleni sikhula ngenxa yokuvela kwamaseli wento efana nokumelana ne-insulin. Ukuphikiswa kwe-insulin uqobo kungadalwa yizigaba ezahlukahlukene zezizathu ezahlukahlukene.
Izizathu eziyinhloko zokuthuthukiswa kokungazinzi kwama-cell membrane receptors ku-insulin yilezi:
Ukudla ukudla okuqukethe inani elikhulu lamafutha nama-carbohydrate.
Ukuhola indlela yokuphila yokuhlala.
Isiguli sandise isikhathi eside isifo se-arterial hypertension.
Ukusetshenziswa kaningi kokudla okuphansi kwekhalori.
Ukuvela kwezimo ezicindezela njalo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezingabaphikisi be-insulin.
Ukweqisa kwe-insulin ekwelapheni isifo sikashukela.
Shintsha emzimbeni wamadoda lapho usumdala.
Isakhi sofuzo sibangelwa ukuzwela okungokwemvelo kwe-insulin ezingeni lofuzo. Uhlobo oludala ukuvela kokungazwisiseki lutholakala ku-chromosome ye-19.
Ukuguqulwa kwe-Gene kuholela kulezi zinguquko ezilandelayo:
amaseli anenombolo eyanele yama-receptor ngaphezulu kolwelwesi lweseli,
ama-receptors aba insensitive,
amasosha omzimba aqala ukukhiqiza amasosha omzimba avimba ama-receptors kulwelwesi lweseli,
ukukhiqizwa kwamanyikwe kwe-insulin engajwayelekile.
Ukusetshenziswa kaningi kokudla okuphezulu emafutheni nakuma-carbohydrate kuyinto ebaluleke kakhulu ebamba iqhaza ekwakhiweni kwesifo se-metabolic emzimbeni wesiguli.
Ukuba khona kwamafutha amaningi emzimbeni emzimbeni kunomthelela ekuthuthukiseni ukukhuluphala.
Izimpawu zokuthuthuka kwalesi sifo
I-Metabolic syndrome yisifo esingavusa ukuphazamiseka okukhulu emzimbeni.
Lesi sifo emzimbeni siqala singanakwa.
Ehlelweni lokuqhubeka kwalo, lesi sifo asibangeli buhlungu, kepha ukuthuthuka okunjalo kwalesi sifo akusenzi sibe yingozi ebantwini.
Ukumelana ne-insulin kunendlela elandelayo yokuthuthuka emzimbeni:
Ukunciphisa umzimba ngokomzimba kanye nokuphazamiseka kokudla kubangela ukwehla kokuzwela kwe-membrane receptors ku-insulin.
Ama-pancreas akhiqiza inani elikhulayo le-insulin ukuze kunqotshwe ukungaxhamazeli okuphumayo kwama-receptors, okudingekayo ekunikezelweni okugcwele koshukela emangqamuzaneni.
Inani elikhulayo le-insulin emzimbeni livusa ukukhula kwe-hyperinsulinemia, okuholela ekuthuthukiseni ukukhuluphala, ukuphazamiseka ohlelweni lwe-lipid metabolism, ukusebenza kahle kwesistimu yemithambo yegazi kanye nokwenyuka komfutho wegazi.
Inani elikhulayo le-glucose engafakwanga ku-plasma yegazi likhuthaza ukukhula kwe-hyperglycemia emzimbeni. Ukugxilisa ushukela omkhulu kuphakamisa ukuguga kweseli ngaphambi kwesikhathi.
Ngokuthuthuka emzimbeni wokwephulwa okunjengokungamelana ne-insulin emzimbeni, le mizwa elandelayo ye-subjective iyabonakala:
ukubukeka kokukhathala okwandayo,
ukukhetha okuphezulu ekudleni,
ukuvela kokuhlasela kwenhliziyo,
ukuvela kwenhliziyo isicanucanu nokuntuleka kokuxhumana kokunyakaza,
ukoma okomayo nomlomo owomile,
ukubonakala kokuthambekela kokuqunjelwa,
ukubukeka kokujuluka kokujuluka.
Ukubonakaliswa kwangaphandle kwe-metabolic syndrome yizimpawu ezilandelayo:
Ukukhuluphala kwesisu, kubonakaliswa ngokubonakala kwamafutha esiswini nasebhande lamahlombe.
Ukuvela kwamabala abomvu esifubeni nasentanyeni. Izimpawu ezinjalo ziyizibonakaliso zokucindezela kwegazi okuphezulu okuhambisana nokwenzeka kwama-spasms emithambo yegazi yenhliziyo. I-vascular spasm icasulwa ukweqiwa kwe-insulin egazini.
Ocwaningweni lwelabhorethri, izibonakaliso eziphambili ze-metabolic syndrome ukukhuphuka kwenani lama-triglycerides, ukwehla kwenani lama-lipoprotein, ukwanda kwe-cholesterol, ukwanda kokuzila okusheshayo kweglucose nabanye.
Izimbangela ze-Insulin Resistance
Ukuncipha kabusha kwe-insulin kwezicubu kungabangelwa yizici eziningi - ushintsho oluhlobene nobudala, ukukhulelwa, ukungasebenzi ngokomzimba, ukuthomba, ukutholwa kwesisindo, ukutheleleka, ukucindezelwa, ukubulawa yindlala, i-uremia, i-cirrhosis, i-ketoacidosis, izifo ze-endocrine. Izimbangela ezivame kakhulu zokungamelana ne-insulin zihlanganisa:
Ushukela omningi. Lapho kudliwa ukudla okuqukethe ushukela omningi ocolisisiwe, umzimba uqala ukukhiqiza i-insulin ngenkuthalo. Umuzwa wamaseli emiphumeleni yawo uyancishiswa, futhi inani le-glucose lihlala liphakeme.
Ukukhuluphala ngokweqile Izicubu ze-Adipose zine-endocrine ne-paracrine function - ikhiqiza izinto ezithinta ukuthikamezeka kwe-insulin amaseli. Ekukhathaleni ngokweqile, ukusebenzisana kwe-hormone nama-receptors kanye nokuhanjiswa kweglucose kwangaphakathi kuyaphazamiseka.
Umthwalo wemfuzo. Isici esivelela kokumelana ne-insulin ubufa. Izinkinga ze-carbohydrate metabolism zitholakala kubantu abanezihlobo zabo eziqondile kutholakala ukuthi banesifo sikashukela i-mellitus, ukukhuluphala ngokweqile, noma i-arterial hypertension.
Ukumelana ne-insulin kuba lapho izicubu ezibuthaka kakhulu ze-insulin - isibindi, i-adipose nezicubu zomzimba - zilahlekelwa amandla abo okubona isenzo saleli hormone. Izindlela eziningana eziholayo ze-pathological zitholakele: ukwanda kwezinga lamafutha acid yamahhala, i-hyperglycemia engapheli, ukuvuvukala okungamahlalakhona kwezicubu ezinamafutha, ukucindezela kwe-metabolic metabolic, ushintsho ekubonakaleni kwe-gene kanye nokungasebenzi kahle kwe-mitochondrial.
Ama-fatty acids wamahhala (i-FFAs) ayisiqalo sendawo yokwakheka kwama-triglycerides, angabaphikisi be-insulin. Lapho ukukhuphuka kwe-FFA kukhuphuka kanye nemetabolism yama-triglycerides ku-myocyte ishintsha, inani labathutha i-glucose liyancipha, ushukela wehla kancane kancane. Esibindi, ukudla ngokweqile kwe-FFA kuvimbela ukudluliswa kanye ne-phosphorylation ye-glucose. I-insulin ayivimbi i-gluconeogeneis, ukukhiqizwa kweshukela ngama-hepatocytes kuyanda. Ngokumelana ne-insulin, ukwakheka nokuqanjwa kwe-VLDLP kuyathuthukiswa, ukuqoqwa kwe-HDLP kuncishisiwe. Ngenxa yezinga eliphakeme le-FFA, ama-lipid aqongelela ezingqamuzaneni zamanyikwe, kuphazamisa ukusebenza kwawo kwehomoni. Umphumela we-antilipolytic we-insulin uyancipha kwezicubu ze-adipose. Ukukhuluphala kubonakaliswa inqubo yokuvuvukala ye-aseptic kuma-adipocytes; ingcindezi ye-oxidative ne-hyperglycemia ayakhiwa.
Ukuzwela kwezicubu zomzimba emiphumeleni ye-insulin kunqunywa yizinto ezahlukahlukene - ubudala, isisindo somzimba, ukuqina komzimba, ukuba khona kwemikhuba emibi nezifo. Ukumelana ne-insulin kutholakala ohlotsheni 2 sikashukela nakwezinye izifo nezinye izimo ezisetshenziswayo, ezisuselwa ekuphazamisweni kwe-metabolic. Ngokuya kule nkinga, izinhlobo ezine zokungamelana ne-insulin zihlukaniswa kwi-endocrinology:
Okomzimba. Kuyindlela yokuzivumelanisa nezikhathi zokudla okuhlukahlukene nokukhululwa kwamandla. Kwenzeka ngesikhathi sokulala ebusuku, ukukhulelwa, ukuthomba, ukuguga, nokusetshenziswa njalo kokudla okunamafutha.
Metabolic. Kuxilongwa nokuphazamiseka kwe-dysmetabolic. Kubonakala ngesifo sikashukela sohlobo II, isifo sikashukela esibolile sohlobo lokuqala, isifo sikashukela esinesifo sikashukela, ukuntuleka kwesikhathi eside komsoco, ukudakwa ngokweqile, nokukhuluphala ngokweqile.
I-Endocrine. Kubangelwa yi-pathologies yezindlala ze-endocrine. Kunqunywa nge-thyrotooticosis, i-hypothyroidism, i-Cushing's syndrome, i-acromegaly, pheochromocytoma.
I-non-endocrine ye-pathological. Kuhloswe ngayo ukugcina i-homeostasis kwezifo kanye nezimo ezithile eziphuthumayo. Ihambisana ne-hypertension ye-arterial, ukwehluleka kwe-renal engapheli, i-cirrhosis, umdlavuza i-cachexia, izifo ezishisayo, ubuthi begazi nokuhlinzwa.
Izimpawu ze-Insulin Resistance
Ukumelana ne-insulin akubonakaliswa ngokomtholampilo, kepha kukhula ngesisekelo sezimpawu ezithile zomzimba, kuvuse ukuphazamiseka kwe-metabolic, kushintsha ukusebenza kwezitho zangaphakathi. Ngakho-ke, maqondana nokumelana ne-insulin, kufanelekile ukukhuluma hhayi ngezimpawu, kodwa ngezimpawu ezihambisana nakho. Ukufakwa ngokweqile kwamafutha kuyabonakala, ikakhulukazi endaweni yasesinqeni. Lolu hlobo lokukhuluphala lubizwa ngokuthi lwesisu. Amafutha we-Visceral aqoqana azungeze izitho zomzimba, athinta ukusebenza kwawo. Olunye uphawu olujwayelekile umfutho wegazi ophakeme, olukhonjiswa yikhanda elibuhlungu emuva kwekhanda, isiyezi, ukudideka, ukubabazeka, ukujuluka nokubomvu kobuso.
Ukuguquguquka kwezinga likashukela egazini kuholela ezigulini zizizwe zikhathele, zibuthakathaka, zidangele, zingacasuki, zibhekene nokoma nendlala eyandayo. Isikhumba singaba ne-pigmentation ethile - i-keratosis emnyama (i-acanthosis). Izindawo zesikhumba entanyeni, ezinhlangothini, emaphethelweni, ngaphansi kwezinduna ezincelisayo ziba mnyama, ziba mide futhi zidibane, kwesinye isikhathi zithambe. Kwabesifazane, ukumelana ne-insulin kuvame ukuhambisana nezimpawu ze-hyperandrogenism ezivela ku-polycystic ovary syndrome. Izimpawu zobunjalo yi-seborrhea enamafutha, i-acne vulgaris, ukungahambi kahle kokuya esikhathini, nokukhula ngokweqile kwezinwele ezingalweni, emilenzeni nasebusweni.
Imiphumela evame kakhulu yokumelana ne-insulin yisifo senhliziyo nesifo sikashukela.Ngokumelana ne-insulin nokukhuluphala, umsebenzi we-insulin uyancipha obangela i-vasodilation, futhi ukungakwazi kwemithambo yokuncipha yisigaba sokuqala ekwakhekeni kwe-angiopathies (ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi). Futhi, ukumelana ne-insulin kunomthelela ekwakhekeni kwe-atherosulinosis, njengoba kushintsha umsebenzi wezinto ezenziwa ngegazi kanye nenqubo ye-fibrinolysis. Indlela yokuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo II njengengxenye yokuqhathaniswa ne-insulin ukulungiswa okuqinile kokuncipha kwe-hyperinsulinemia nokuncipha okwalandela kwamaseli we-beta, ukwehla kokuqalwa kwe-insulin, kanye nokwenziwa kwe-hyperglycemia ephikelelayo.
Ukuhlonza ukumelana ne-insulin kuwumsebenzi onzima wokuxilonga ngenxa yokuthi lesi simo asinazo izibonakaliso ezithile zomtholampilo futhi asenzi iziguli ukuba zifune usizo lodokotela. Njengomthetho, kutholwa ngesikhathi sokuhlolwa yi-endocrinologist yesifo sikashukela noma ukukhuluphala. Izindlela ezivame kakhulu zokuxilonga yilezi:
Ukuhlolwa okucindezelayo kwe-insulin. Le ndlela isuselwa ekuphatheni isikhathi eside kwe-glucose, ngenkathi icindezela ukusabela kwama-β-cell nokukhiqizwa kwe-glucose endo native. Ukuzwela kwe-insulin kunqunywa izinga le-glucose embusweni wokulingana. Lapho inani lesikhombi se-MI liyi-≥7.0, ukumelana ne-insulin kuqinisekisiwe.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose yomlomo. Kusetshenziswa kabanzi ohlakeni lokuhlonza, okunquma ukuba khona nokuqina kwe-hyperinsulinemia. Kwi-serum yegazi, izinga le-glucose, i-C-peptide, i-insulin esiswini esingenalutho futhi ngemuva kokuthatha ama-carbohydrate lilinganiswa. Ngemuva kwamahora amabili umthwalo we-carbohydrate uma kwenzeka kuba ne-hyperinsulinemia, inkomba ye-insulin ingaphezu kwama-28,5 μI / ml, ngesifo se-metabolic inkomba ye-C-peptide ingaphezulu kwe-1,4 nmol / L, futhi kwisifo sikashukela i-mellitus inkomba ye-glucose ingaphezu kuka-11.1 mmol / L.
I-Intravenous glucoseokubekezelela ukuhlolwa. Ikuvumela ukuthi uhlole isigaba soku secretion se-insulin, ukukhiqiza kabusha imodeli yokuphilayo yesenzo sayo. Ngesikhathi senqubo, i-glucose ne-insulin zilawulwa ngokuhambisana nesikimu, imiphumela ikhombisa ushintsho kushukela, ngaphandle kwe-insulin nangaphansi kwesenzo sayo. Ukumelana ne-insulin kunqunywa yinkomba ye-SI -4 min -1.
I-HOMA-IR Index. Ngaphambi kokubala i-coeffanele, kwenziwa ukuhlolwa kwegazi, izinkomba zenani le-insulin, ushukela (ushukela) ku-plasma esheshayo. Ukuba khona kokumelana ne-insulin kuboniswa yinkomba engenhla kwe-2.7.
Ukunakekelwa kwezokwelapha kweziguli kuphelele. Akuhlosile kuphela ukuthuthukisa ukuphendula kwe-insulin kwezicubu, kepha futhi nasekuqondiseni ukugcwala kwe-glucose, cholesterol, insulin yegazi, ukuqeda isisindo ngokweqile, kanye nokuvikela ukukhuluphala, isifo sikashukela, inhliziyo kanye nezifo zemithambo yegazi. Ukwelashwa kwenziwa ngu-endocrinologist, umondli wezempilo, ofundisayo wokwelapha ngokuzivocavoca. Iziguli ziyakhonjiswa:
Ukwelashwa kwezidakamizwa. Kunikezwa imishanguzo yeziguli ezinenkomba yesisindo somzimba esingaphezu kwama-30 ezinobungozi obukhulu besifo senhliziyo. Ama-Biguanides, alpha-glucosidase blockers, ama-thiazolidinediones asetshenziselwa ukunciphisa isisindo futhi andise ukuzwela kwe-insulin.
Ukudla okuphansi kwe-carb Abantu abamelana ne-insulin baboniswa ukudla okuphansi kuma-carbohydrate, kepha ngaphandle kwezikhathi zokuzila. Ukudla okwenziwe ngokweqile kusuka ekudleni okuhlanu kuya kweziyisikhombisa ngosuku ngezingxenye ezincane. Lolu hlelo lukuvumela ukuthi ulondoloze izinga loshukela elizinzile, umsebenzi olinganayo we-insulin.
Ukuvivinya umzimba njalo. Ukuzivocavoca kusebenze ukuhambisa i-glucose kanye nekhono le-insulin yokuvuselela ukwakheka kwe-glycogen. Uhlobo lokuqeqeshwa lukhethiwe ezigulini ngazinye: kusukela ekuhambeni ngezemidlalo nasekuzivocavoca okukhanyayo kuya ekuqineni nasekuqeqesheni i-aerobic. Isimo esikhulu ukuvelela kwamakilasi.
Isimo sokumelana ne-insulin singalungiswa ngendlela ehlanganisiwe, kufaka phakathi ukudla nokudla komzimba. Ngawo wonke ama-aphoyintimenti odokotela, i-prognosis ivame ukuthandeka. Ngenhloso yokuvimbela, kuyadingeka ukulawula ukuthathwa kwama-carbohydrate, ikakhulukazi ushukela osetshenzwe kahle, ukugwema ukungasebenzi ngokomzimba, ngokuphila kokuhlala phansi, ukufaka ngenhloso ukuqeqeshwa kwezemidlalo ohlelweni lwansuku zonke. Kubalulekile ukuthi abantu abanokukhuluphala bagxile ekunciphiseni isisindo. Uma kunomlando womndeni wesifo sikashukela i-mellitus, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, ukuqaphela ngezikhathi ezithile ushukela, i-insulin, ne-cholesterol yegazi kunconyelwa.
Ukuxilonga i-metabolic syndrome
Ukwelashwa kwe-metabolic syndrome kwenziwa ngama-endocrinologists.
Lapho usuqala lesi sifo, kuba nezinkinga ezahlukahlukene ezingadinga ukubonisana nabanye ochwepheshe bezokwelapha, njengokuthi. Isibonelo, udokotela wezokwelapha, i-cardiologist kanye nezazi zezempilo.
Lapho uvakashela i-endocrinologist, inqubo yokuxilonga yenzeka ngezigaba eziningana.
Izigaba eziphambili zokuxilongwa yilezi ezilandelayo:
Lapho wenza inhlolovo yeziguli, udokotela oholayo uqoqa imininingwane futhi ahlanganise umlando wezokwelapha. Lolu cwaningo luhlinzekela ukucaciswa kwezimo zokuphila, imikhuba yokudla nokuluthwa kokudla, ukuba khona kokukhuluphala ezihlotsheni eziseduze, ukuba khona kwesifo senhliziyo nemithambo yegazi ephezulu.
Lapho wenza ukuhlolwa kwesiguli, udokotela ohambelayo wenza:
Ukunqunywa kohlobo lokukhuluphala.
Kukala ukujikeleza kwesiguli.
Chaza ubudlelwane phakathi kokujikeleza okhalweni kanye nokujikeleza okhalweni.
Kukala ukukhula futhi kukala isiguli.
Ukwenza ucwaningo lwelabhoratri lapho kutholakala khona ukugula kubandakanya izifundo ezilandelayo:
ukulinganiswa kwe-cholesterol ephelele egazini,
ukulinganiswa kwenani lama-lipoprotein aphezulu wesisindo somzimba ne-cholesterol ephezulu yomzimba,
ukunquma kwenani lama-lipoprotein asisindo esincane kanye ne-cholesterol ephansi emzimbeni,
ukuzimisela kwama-triglycerides egazini,
isivinini se-plasma glucose,
ukukala inani le-insulin emzimbeni,
ukukala inani leptin emzimbeni.
Ngokusekelwe emiphumeleni yezimpendulo nokuhlolwa kwelebhu, udokotela uphetha ngokuthi isiguli sinesifo se-metabolic.
Ukwelashwa kokuphazamiseka emzimbeni
Isiguli ngasinye esitholakala sinesifo se-metabolic sidinga indlela eyodwa yokwelashwa. Ukukhethwa kwezidakamizwa kuncike esiteji kanye nezimbangela zokukhula kokukhuluphala.
Ngaphezu kwalokho, ukukhetha kwezidakamizwa kuncike emiphumeleni yezifundo ze-biochemical zokuqukethwe kwezakhi ezithile ku-plasma yegazi.
Ukuqaliswa kokulashwa kwezidakamizwa kwe-insulin ukumelana kwe-insulin kuhloselwe ukuthuthukisa inqubo yokufakwa kwe-insulin, ukuqinisa inkomba ye-glucose emzimbeni kanye nokwenza inqubo izinqubo zemetabolism yamafutha zibe njalo.
Ehlelweni lokwelapha izidakamizwa, amaqembu alandelayo wezidakamizwa asetshenziswa:
Amavithamini Izidakamizwa ezinhle zibandakanya i-Complivit Diabetes ne-Oligim.
Izidakamizwa zokunciphisa ukumelana ne-insulin.
Izidakamizwa ezikhulisa ukuzwela kwe-insulin.
Izidakamizwa ezijwayelekile zisebenza njenge-metabolism nomfutho wegazi.
Izidakamizwa ama-inhibitor angamafutha.
Izidakamizwa ezithinta isistimu yezinzwa ephakathi nendawo futhi zivimbela iphango.
Ekwelapheni i-metabolic syndrome, akunconyelwe ukusebenzisa izidakamizwa zeqembu lama-anorectics acindezela iphango. Le mishanguzo inegalelo ekunciphiseni okukhulu kakhulu kokuzwela kwezicubu kwe-insulin ye-hormone.
Le mishanguzo ifaka le mithi elandelayo.: I-Fluoxetine, iProzac, iMeridia, iReduxin.
Indlela yokuphila phambi kwe-metabolic syndrome
Ukubuyisa umzimba emzimbeni nokwandisa ukuzwela kwe-insulin, kumele kuhlangatshezwane nemibandela eminingi, okuyisisekelo sazo njengokudla okufanele kusetshenziswa ukudla okuphansi kuma-carbohydrate kanye nokuzivocavoca okuphakathi komzimba.
Ngenqubo yokudlala imidlalo, umzimba ushisa izitolo ezinamafutha. Ngaphezu kwalokho, ngalezo zikhathi, izinqubo ze-metabolic ziyasheshiswa, lokhu kunomthelela wokuthi ngisho noma umzimba uphumula, uyaqhubeka ukucubungula izitolo ezinamafutha zibe amandla.
Ukuzivocavoca umzimba njalo phakathi kwesifo sikashukela kanye nokuhlinzekwa komzimba okulinganiselayo emzimbeni kuholela ekukhuleni kwamahomoni enjabul, ama-endorphin, emzimbeni wesiguli.
Lezi zingxube zamakhemikhali ezisebenzayo zisiza ukuthuthukisa imizwa, zisiza ukulawula isifiso sokudla futhi zandise izifiso zama-carbohydrate.
Umgomo oyinhloko wokudla osetshenziswa ku-metabolic syndrome ukukhawula ukungena kwama-carbohydrate namafutha. Ukudla okunjalo kukuvumela ukuthi uyeke inqubo yokukhuluphala futhi kancane kancane ukhiphe isisindo esengeziwe.
Izazi zezempilo zesimanje ziphikisana kakhulu nendlala nokusetshenziswa kokudla okuphansi kwekhalori.
Ukudla okusetshenziswa ku-metabolic syndrome kungama-carbohydrate aphansi. Futhi nangendlela efanelekile yokuhlanganisa imenyu, nakho kungahle kube okumnandi futhi kwanelise.
Usebenzisa izinhlobo zokudla ezivunyelwe, ungapheka izitsha ezahlukahlukene.
Ukusetshenziswa kokudla kilojoule ephansi ukwehlisa isisindo kuholela ekunciphiseni ukusebenza kwamasosha omzimba, okubuye kunciphise ukuzivikela komzimba emgomeni wegciwane namagciwane.
Ukusetshenziswa kokudla okuphansi kwe-carb kukuvumela ukuthi uqinise umzimba futhi wenze ijwabu lelo lokugaya ukudla lisebenzise ukusetshenziswa kwezithelo, imifino kanye nemikhiqizo yobisi ethosiwe ekudleni. Ividiyo ekhangayo kulesi sihloko izokusiza uqonde ukuthi iyini i-insulin ukumelana ne-syndrome.